1995 – Year – Channel Myanmar
Babe:The Pig in the City (1995) ကဲ အားလုံး နောက်ကကြည့်ဖို့ 1995 ခုနှစ်ကထွက်ရှိခဲ့တဲ့ Babe ဆိုတဲ့ ၀က်လိမ္မာ ကား လေးကိုတင်ဆက်ပေးမယ် ဒီကားလေးက ၁၉၉၅ ခုနှစ်မှာ Best Movie Of the Year ဆုကိုရရှိခဲ့ပါတယ်တဲ့ ၁၉၉၀ ပတ်ဝန်းကျင်က မွေးခဲ့ကြတဲ့သူတွေဆို ဂျီးကပ်နေတဲ့ လေးထောင့် ဗီဒီိယို တိပ်ခွေကြီးတွေနဲ့ ကောင်းခန်းရောက်မှ တဂျစ်ဂျစ်နဲ့ လိုင်းတွေထနေတဲ့ပုံရိပ်တွေနဲ့ အတူကြည့်ရှူဖူးကြမှာပါ ကဲ ကျွန်တော် ဒီနေ့တင်ပေးမယ့် ဇာတ်လမ်း အကျဉ်းလေးကတော့ ဘာတဲ့လဲဟေ့ Babe နော် ကဲအားလုံးနားထောင်ကြဗျာ ကြင်နာတတ်တဲ့ လယ်သမားကြီး ဟော့ဂတ်ဟာ ဒေသတွင်းတိရိစ္ဆာန်ပြိုင်ပွဲမှာ babe နဲ့အတူတူ ဆုရခဲ့ပါတယ်တဲ့ ကဲပရိတ်သတ်ကြီးရေ တနေ့ ခရစ္စမတ်ပွဲမှာ တော့ ဟော့ဂတ်တယောက်နောင် နှစ်မှာလဲ babe နဲ့ အတူတူ ထပ်မံအနိုင်ရဖို့ ဘာဘာညာညာကြွားပါ တော့တယ် ကဲ ပရိတ်သတ်ကြီးရေ babe ကကော ဒီတိုင်းနေမယ် ထင်သလား ဗျ မနေပါဘူးတဲ့ ပရိတ်သတ်ကြီးရေ babe ဆိုတဲ့ သောက်ကမျင်းဝက်ဟာ သူနဲ့ အတူတူနေတဲ့ တိရိစ္ဆာန်တွေဆီက အတုယူသင်ယူဖို့ကြိုးစားသတဲ့ ပရိတ်သတ်ကြီးရေ တော်တော် သောက်ကမျင်းတဲ့ ၀က်နော် ပရိတ်သတ်ကြီး ကဲ ပရိတ်သတ်ကြီးကော ဒီလိုသောက်ကမျင်း ၀က်တွေ့ဖူးကြလား အေး မတွေ့ဖူးရင် အခုချက်ချင်း ...
Babe:The Pig in the City (1995)
Crying Freeman (1995) Crying Free Man 1995 ================== ဒီတစ်ခါမှာတော့ ဂျပန် ကာတွန်း manga ဇာတ်လမ်းတွေကို ပြန်ရိုက်ထားတဲ့ ဇာတ်ကားတွေထဲက အက်ရှင်ဇာတ်ကားကောင်းလေးတစ်ကားကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ ဒီဇာတ်ကားဟာ fantasy film award အတွက် ဆန်ကာတင်ဝင်ခဲ့သလို ဘတ်ဂျက်နည်းနည်းနဲ့ အကောင်းဆုံးလက်စွမ်းပြ ရိုက်ကူးထားပါတယ်။ ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းကတော့ တရုတ်လျို့ဝှက်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုက လူသတ်ပြီးရင်မျက်ရည်ကျတတ်တဲ့ လူသတ်သမားတစ်ယောက်ကို တစဖက်ရန်သူဂိုဏ်းက လက်တုံ့ပြန်ဖို့ကြိုးစားတဲ့ ဇာတ်လမ်းပါ။ ဇာတ်ကားက B အဆင့် ဇာတ်ကားတစ်ကားဖြစ်ပေမယ့် တိုက်ခိုက်ခန်းတွေကို လှလှပပ ရိုက်ပြထားတာကြောင့် အတော်လေးကြည့်လို့ကောင်းပါတယ်။တိုက်ခိုက်ခန်းတွေမှာ အနှေးပြကွက်တွေကို အထူးဂရုစိုက်ပြီး အသေးစိတ်ပြုလုပ်ထားပါတယ်။ မင်းသား Mark Dacascos ရဲ့ ကိုယ်ခံပညာပိုင်နိုင်ကျွမ်းကျင်မှုကို လည်း မြင်တွေ့ရမှာပါ။ Christophe Gans ရဲ့ လက်ရာကောင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး Mark Dacascos(ပါရာနာဝေးမင်းသား) က Freeman အဖြစ်သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ်။ လိင်အသားပေးဇာတ်ဝင်ခန်းတချို့ပါဝင်တာကြောင့် မိသားစုအတူကြည့်ဖို့ မသင့်တော်ပေမယ့် ၁၉၉၀ ပြည့်လွန်နှစ်တွေရဲ့ အကောင်းဆုံး အက်ရှင်ကားတွေထဲက တစ်ခုအဖြစ် ...
IMDB: 6.5/10 9,618 votes
Dilwale Dulhania Le Jayenge (1995) IMdb 8.2 အထိ အောင်မြင်မှုရခဲ့တဲ့ ရှာရွတ်ခန်းရဲ. Drama ကားကောင်းလေးတစ်ကားပါ ဇာတ်လမ်းအစမှာတော့ ဗြိတိန်မှာ မွေးတဲ့ မင်းသားနဲ့ မင်းသမီးဟာ ဆွန်ဇာလန်နိူင်ငံသွားရင်း ချစ်ကြိုက်ကြပါတော့တယ် အချစ်စစ်ဆိုတာ မဖြောင့်ဖြူးဘူးဆိုတဲ့ အတိုင်း မင်းသမီးရဲ့ အဖေက အိန္ဒိယကို ပြန်လာခိုင်းပြီး တစ်ခြားတစ်ယောက်နဲ့ လက်ထပ်ခိုင်းတဲ့ အခါမှာတော့ ............. ဘာတွေဆက်ဖြစ်ကြမှာလဲဆိုတာ CMပရိသတ်တွေ ကိုယ်တိုင်ပဲ ခံစား ကြည့်ရှုလိုက်ကြပါ (ဘာသာပြန်သူကတော့ Sithu Aung ပဲဖြစ်ပါတယ်) File Size : 1.2 GB /600 MB Quality : Blu ray 720P Running Time : 3hr 1minute Format : Mp4 Genre : Comedy, Drama, Musical Translator : Sithu Aung Encoder : Thanhtike Zaw Download Here 720p HD ...
China Dragon (1995) မြန်မာစာတန်းထိုး ကဲဗျာ ၉၀ခုနှစ်ဝန်းကျင်လောက်က ၀က်ဝက်ကွဲအောင်မြင်ခဲ့ပြီး ငယ်ဘ၀က တန်းတန်းစွဲကြည့်ခဲ့ကြတဲ့ ရှောင်လင်ကတုံးလေး ဇာတ်ကားကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ် 90 Kids တွေဆို ကောင်းကောင်းကြီးရင်းနှီးကြမှာ ဖြစ်ပြီး ကလေး ဘ၀ကတည်းက ဘယ်နှစ်ခါကြည့်ကြည့်မရိုး နိုင်တဲ့ ဇာတ်ကားလေး တွေပေါ့ဗျာပရ်ိတ်သတ်ကြီးကတော့ ကြိုက်နှစ်သက်လောက်မယ် ထင်ပါတယ် ဇာတ်လမ်း အကျဉ်းလေးကတော့ ဟူနန် ပြည်နယ် ရှောင်လင်ကျောင်းက အမေရိကန် ဟာဝိုင်အီမှာ ကျင်းပမယ် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ သိုင်းပြိုင်ပွဲကြီးကိုပါဝင်ဆင်နွဲဖို့ အတွက် စီရီ နဲ့ စီလုံ မောင်နှမ ၂ယောက်ကို စေလွတ်ခဲ့ရာမှ ဟာဝိုင်အီမှ ရှိနေတဲ့ ကတုံးဝတုတ်နဲ့ ဆုံမိပြီး ဘယ်လို ဇာတ်အရှုပ်တော်ပုံတွေများ ကြုံတွေ့ရမလဲ ကတုံးဝတုပ်ကကော ဘယ်လို လျှိုကွက်တွေနဲ့များ ပရိတ်သတ်ကြီးကို ပါးစပ်မပိတ်ရအောင် စွမ်းဆောင်မလဲဆိုတာကို ပရိတ်သတ်ကြီးက ဆက်လက်ရှူစားကြရမှာပါ လွန်ခဲ့တဲ့ ဆယ်စုနှစ်တခုက ဇာတ်ကားကို ပြန်ရှာထားတာမို့ ကွာလတီအကော်ငးဆုံးကိုရွေးချယ်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ဗျ ဘာသာပြန်သူကတော့ သာရစ် ဖြစ်ပါတယ် ။ Download On Pcloud
China Dragon (1995) မြန်မာစာတန်းထိုး
Whisper of the Heart (1995) မြန်မာစာတန်းထိုး IMDb 8.0 တောင်ရထားတဲ့ ကားဆိုတော့ ကာတွန်းကားဆိုပြီး အထင်သေးလို့မရတဲ့ အပြင် နာမည်ကြီး ကာတွန်းရုပ်ရှင် Spirited Away ကိုဖန်တီးထားတဲ့ ဒါရိုက်တာကပဲ ဆက်လက်ရိုက်ကူးထားတဲ့ဇာတ်ကားလေးတကားနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ တခါက၁၄နှစ်အရွယ်ကျောင်းသူလေး Shizuku ဟာ သူ့မိသားစုနဲ့ Tokyo မြို့မှာနေသတဲ့... သူဘဝကလည်းပုံမှန်ကျောင်းသူတယောက်လိုပါပဲ... ဒါပေမယ့် တခုထူးခြားတာက Shizuku ဟာကျောင်းပိတ်ရက် ဆိုတာနဲ့ ဒေသခံစာကြည့်တိုက် သွားပြီးရှိသမျှFairy Tale (အကြမ်းဖျင်းအားဖြင့်ကလေးပုံပြင်ပေါ့) စာအုပ်တွေငှားဖတ်လေ့ရှိပြီး သူကိုယ်တိုင်ကလည်းစာရေးသူတယောက်ဖြစ်ချင်တဲ့သူပါ... ဒါမယ့် သူစာအုပ်တွေဖတ်ရင်းဖတ်ရင်း နာမည်တခုနဲ့ ရင်းနှီးလာတယ်... သူငှားဖတ်သမျှစာအုပ်တိုင်းရဲ့ငှားဖတ်သူစာရင်းကဒ်မှာ Seiji ဆိုတဲ့ကောင်လေးကသူ့ရှေ့အမြဲရောက်နေတယ်... ဒီတော့ဆယ်ကျော်သက်မိန်းခလေးသဘာဝအတိုင်း မမြင်ဘူးတဲ့ကောင်လေးကိုပဲအထင်ကြီးမိပြီး သံယောဇဉ်တွယ်သွားတယ်တဲ့... ဒီလိုနဲ့တနေ့မှာ Shizuku က သူ့အဖေကို ထမင်းဘူး သွားပို့ပေးရင်းရထားစီးလာရာမှာ ရထားပေါ်ကိုမှတ်တိုင်တခုမှာကြောင်ကြီးတကောင်ကတက်လာပြီး Shizuku အတွက် အထူးအဆန်းဖြစ်သွားတာပေါ့... ပိုထူးဆန်းတာကကြောင်ကြီးကလူအတိုင်းပဲ သူဆင်းချင်တဲ့မှတ်တိုင်မှာဆင်းသွားတယ်တဲ့... ဒါနဲ့ကြောင်ကြီးကိုစိတ်ဝင်စားလို့ Shizuku ကနောက်ကလိုက်ရင်း Alice ကနေ Wonderland ရောက်သလိုဖြစ်သွားမလားဆိုတာ ?? စိတ်ဝင်စားဖွယ်ဆက်လက်ရှုစားကြပါ သီချင်းတွေကို အတတ်နိုင်ဆုံး ဆီလျော်အောင် ဘာသာပြန်ပေးထားပါတယ် အမှားပါတာရှိ ခွင်.လွတ်ကြပါကုန် Japan Anime တွေထုံးစံအတိုင်း ဇကားအပြီးမှာတော့ မက်ဆေ့ခ်ျတခုတော့ ...
IMDB: 8.0/10 29,707 votes
Whisper of the Heart (1995) မြန်မာစာတန်းထိုး